400 Customer Service nzvimbo
nzvimbo Yedu 400 vatengi vari akakamurwa mashoko kukurukura nzvimbo, rinonyanya kuvandudza mutengi kugutsikana, mutengi maitiro kuongorora nzvimbo, uye chigadzirwa yokutengesa nzvimbo, iyo kukupa mabasa ounyanzvi kusanganisira basa centre ruzivo, mutengo yokubvunza, zvekushandisa rutsigiro, chigadzirwa zvichemo, kugadziridza uye handingadariki zvikamu kubvunzurudza, uye okutengesa rutsigiro.
Munguva aishandisa ruzivo zuva tinotora nguva zvakazara kusuma zvigadzirwa zvitsva uye vanoita hunobatsira mutengi ruzivo mabasa, kukubatsira kunzwisisa SHANTUI nani, uye kukupa private customized okuvaka mhinduro.
Tinoda kupa Kurovedza hunoshamisa maindasitiri nenyanzvi, saka tiri nechido kuvaka imwe opareta kudzidzisa chawo, dzinotsigira National paakasimudza Unyanzvi Competition uye Concrete Design Competition, uye zvinoshingaira kutsigira pamwe kuvakwa makambani.
Tine Software uye Hardware zviwanikwa uyewo makore ruzivo rwokuvaka vaifanira kukupa vakarongeka uye zvikuru customized kuvakwa mhinduro. Ticharamba vachifara kuteerera chero kwenyu chigadzirwa design, kugadzira, kana basa pfungwa panguva kubvunza rikurumidze.
The kudiwa kusiyaniswa pakuvaka nguva dzose ikoko, uye isu vaizopedza nesimba mukubatsira kuti kusarudza zvakarurama midziyo toziva Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri kukosha midziyo Ungatenga.
Mumwe-mira Financial Services
Yakavakirwa kunzwisisa engineering michini zvinhu uye mutengi zvinodiwa yakadzika, tinoshanda pamwe makuru zvemari masangano kugovera basa renyu nezvakanakisisa mari mhinduro.
Kuti kusangana zvamunoshayiwa zvose, isu dzinopa nyanzvi zvokufambisa Delivery basa uye kurovedzwa basa kwokutanga kugadzwa dzose chimedu michina.
365 × 24 Year-kumativi Service
Pasi rose, tine vanopfuura 5000 basa mainjiniya uye 1500 dzakazvitsaurira motokari basa. Tinosungirwa yegore 24-awa basa kunyange panguva mazororo, maererano netsika yedu nguva dzose ichipa "mhinduro mukati kwemaminitsi 15 uye basa kupera mumaawa 24."
We makasimbisa akakwana GPS Global Service Center, uye tinogona kukupa imwe proactive akachenjera wavadiri hurongwa kuburikidza Internet Zvinhu pachikuva.
Spare Parts Kana uchidzida
Tine zviuru kupembedza zvikamu rinonyanya mhiri shanu makondinendi kuti wemari inenge mabhiriyoni 1 nyanzvi kupembedza nhengo. Tinovimbisa kuti kupembedza zvikamu achaiswa mumaawa 72.
Pashure-musika Worry-isina Service
tinosungirwa kupa pashure-musika mabasa, kusanganisira Rentals, wechipiri-ruoko motokari Mutengo, kutengeserana-dzi, overhauls, uye marara. Tinogara kunamatira yedu basa uye basa nayo zvinokunetsa sezvatinogona.
Tine "kutenga-nyanzvi-fekitari-kuvaka" mana nzira pamwe uye Exchange papuratifomu, tiine Kwevadzidzi uye basa chokubuda.